Waxaad u baahan tahay deleter file ku ool ah marka aad computer noqdo daalid iyo ka jawaabidda gaabis bilaabo. Tan iyo Windows akhriya oo dhan files iyo entries diiwaanka lagu guda jiro nidaamka xawaaladaha ay, ay qaadato lacagta hufan oo waqti in uu akhriyo drive adag overpopulated la files. Marka files rabin laga saaro, Windows leeyahay in uu akhriyo files yar oo sidaas kabaha computer ka eego si degdeg ah.
Sidoo kale, mar walba oo aad initialize barnaamij, Windows mar kale akhriya oo dhan faylasha loo baahan yahay iyo haddii ay jiraan aad u badan oo iyaga ka mid ah, initialization barnaamijka noqotaa mid gaabis ah. Sidaa darteed tirka files isticmaalin kordhiyaa waxqabadka nidaamka guud iyo sidoo kale.
Deleter file A ma aha barnaamij u gaar ah, laakiin feature ah oo lagu daray in ku dhowaad dhammaan codsiyada nidaamka optimizer. Xitaa haddii optimizer PC wax ka maqan qaababka kale ee muhiimka ah, waxay u badan tahay lahaa leeyihiin drive nadiifiye adag in ka saari kara faylasha loo baahneyn ka disk ah.
Top optimizers 10 PC oo ay ku jiraan faylka la rabin tirka feature iyaga ku qoran yihiin hoos:
1 makaanik System (Rating 9.9 / 10) - Wixii Windows
Makaanik System waa magac ku kalsoon tahay marka ay timaado nadaafadda your computer iyo tirka files rabin ka disk adag. Barnaamijku waxa uu ku guuleystay Gold Award for isagoo casri ah oo hufan si ay u tayadoodii aad PC dadaallada yaraan. Sababtoo ah halka ay interface fududahay in la isticmaalo, barnaamijka waxaa isticmaali kara dadka ku dhowaad da 'kasta. Si kastaba ha ahaatee, makaanik System lama jaanqaadi karaan qaar ka mid ah barnaamijyo antivirus oo uusan si fiican u shaqeeyaan haddii antivirus ah in aynan la geliyo kombuyuutarka.
2 Fix-Waxaa Utilities Pro (Rating 9.63 / 10) - Wixii Windows
Deggan lambarka labaad ee liiskan, dayactir-Waxaa Utilities Pro waa u user kasta farsamo oo aan farsamo oo doonaya in ay tayadoodii qaab kombiyuutarka. Iyadoo badhanka dhalato hal-click in barnaamijka uu leeyahay, waxaad hagaajin kartaa ku dhowaad dhammaan nadiifinta file arrimaha la xiriira. Feature kaliya in dayactir-Waxaa Utilities Pro maqan yahay maamulka xijaab, laakiin in la iska indho tiri karin sida qaababka kale in dalabyo barnaamijkan waa ku filan oo hufan si ay u tayadoodii waxqabadka aad PC.
3 WinOptimizer (Rating 9.5 / 10) - Wixii Windows
Ugu booska saddexaad waa WinOptimizer by Ashampoo. Qalabkani waxa uu kuu ogolaanayaa inaad kala doorato hababka iskaanka deg deg ah oo qoto dheer. Iyada oo nidaamka iswada ayna karti, WinOptimizer Daahiriyo faylasha loo baahnayn iyo entries diiwaanka toddobaad kasta. Iyadoo feature One-Click Optimizer ah, waxaad si fudud u tayadoodii karaa qaab aad PC la hal click. Si kastaba ha ahaatee ka biyodiiday ee qalabka waa, haddana ma laha Tababaraha wax xijaab drive adag oo sidaas daraaddeed faragelinta Buuggan waxaa loo baahan yahay in arrin in.
4 Advanced System Optimizer (Rating 9.28 / 10) - Wixii Windows
Barnaamij run si sahlan loo isticmaalo in kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan hawlo badan oo ayna la hal click. Iyadoo qaababka sida Updater Driver iyo Game Optimizer, waxaad joogi kartaa xiisad-xor ah oo dabacsan marka ay timaado la xariirta wadayaasha ah hardware ku rakiban ama halka ciyaaro khayraadka kulan degdeg ah ay u kala horreeyaan. Inkastoo wax feature hardware socodka failure maqan yahay in System Advanced Optimizer 3, qaab joogto ah ayna, failure hardware la yaabka lahaa yareeyo.
5 Advanced SystemCare PRO (Rating 8.68 / 10) - Wixii Windows
Weli nidaam kale optimizing qalab loogu PRO Windows, Advanced SystemCare waa u fududahay in la isticmaalo, sababtoo ah ragga calanka u ballaaran iyo qoraallada mid ah qaababka ay leedahay. Barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa dad ka wax bartay oo ka mid ah da 'kasta. PRO Advanced SystemCare awood u maaraynta khayraadka PC ah si hufan oo kaa caawinaysaa in aad your computer ka faa'ideysan ay ka buuxaan. Barnaamijka wuxuu leeyahay ma qalab maamulka xijaab disk taas oo ka biyodiiday kaliya ee software-ka.
6 TuneUp Utilities (Rating 8.53 / 10) - Wixii Windows
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo inta badan loo isticmaalaa qalab nidaamka optimizer laga heli karaa internetka iyadoo ku dhowaad dhammaan qaababka iyo qalabka loo baahan yahay in ay si buuxda u tayadoodii aad PC. Sababta kaliya TuneUp Utilities joogidda booska 6aad yahay, waxa uu leeyahay interface adag iyo haddii aad ku cusub tahay kombiyuutarada, waxa ay noqon doontaa loolan ah oo aad loo isticmaalo. Sidoo kale, inkastoo of noqdo nidaamka optimizer ool ah, hawlo badan oo u qabata qaadan in ka badan waqtiga caadiga ah si uu u dhameystiro.
7 Nidaamka Utilities Suite (saraysiinta 8.38 / 10) - Wixii Windows
Tani waa mid ka mid ah qalab si buuxda dadku ku leh ayna kaa caawin kara in aad la kordhiyo waxqabadka nidaamka iyadoo la fogeynayo files aan loo baahnayn, waayo-aragnimo fiican oo dhirta, iyo nadiifinta diiwaanka ku ah tallaabooyinka fudud ee yar ah. In kasta oo qalabka ka maqan qaababka badan oo lagu ogaanayo, kuwaas oo u baahan marka software laftiisa waa awood u fiican oo PC iyo baabi'inta baahida loo qabo wax in meesha ugu horeysa. War sow ma aha?
8 Pro WinUtilities (saraysiinta 8.1 / 10) - Wixii Windows
WinUtilities Pro waa qalab wax ku ool ah nidaamka ayna. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa, lagu ogaado arrinta oo ay isticmaalaan WinUtilities, si loo saxo dhibaatada fudayd. Mid ka mid ah inaan aragno khasaare wayn oo qalab uu leeyahay waa, haddana ma laha qalab badan oo lagu ogaanayo in uu sheego arrimaha ay u gaar ah. Haddii aad si fiican u ogahay hawlihii aad PC oo ay awoodaan si loo ogaado dhibaatada, WinUtilities Pro shaqeeyaa sida soo jiidashada.
9 Norton Utilities (saraysiinta 7.6 / 10) - Wixii Windows
Soo diyaariyay mid ka mid ah ururada ku caan ah in caan ku tahay ilaalinta computer hanjabaadaha ka iman kara, Norton Utilities laga yaabaa in aanay qaar ka mid ah maamulka xawaaladaha lagama maarmaanka ah iyo qalabka baadhista laakiin sifooyinka la heli karo iyo interface ah si sahlan loo Dul, waxa uu noqonayaa mid ka sahlan ee dadka isticmaala ku cusub isticmaali codsiga iyo kor loogu qaado waxqabadka nidaamka waqti ah.
10 Uniblue PowerSuite (saraysiinta 7/10) - Wixii Windows
In kasta oo qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah sida nidaamka gurmad iyo soo kabashada, dib u soo kabashada file, iyo dayactirka toobiye ayaa seegay in qalab, la feature nadiifinta disk adag, aad kor ugu qaadi waxqabadka nidaamka aad waqti. Qaybta ugu fiican waa in Uniblue PowerSuite ayaa dad badan oo si sahlan loo fahmi Casharrada oo kaa caawin kara in aad qabato hawlo hab fiican oo kala duwan fudayd iyo hufnaan.
Inkastoo kasta optimizer PC ool ah - oo ay ku jiraan kuwa kor ku qeexan - waa caqli ku filan si ay u aqoonsadaan files muhiim ah oo kala ah khasab ah iyo kuwa aan la isticmaalin / waxtar lahayn, waxaa si xoog leh lagula talinayaa in aad dib u eegaan dhammaan faylasha iskaan oo ku calaamadeysan tahay rabin by qalab kasta oo kale hadda ka hor waxaa si joogto ah waxay tirtirtaa iyaga. Tani waxay xaqiijineysaa in optimizer PC ma sameeyo nidaamka deganayn ama istimaalaynin kac ahayn.
> Resource > masixi > 10 File Deleters Best in saar Faylal ay la rabin ka Windows